Kingsoft Office 2013 tarjumaada Isbaanishka | Laga soo bilaabo Linux
Hadaad isticmaasho Xafiiska Kingsoft 2013 Waxaad ka caawin kartaa tarjumaadda maadaama ay fududahay.
1.- Marka hore annagu ma toosinno WSP Community:
Boggu wuxuu ku yaal Github, halkaas ayaan ka heli doonnaa xirmooyinka iyo feylasha ay bulshada WPS u qabato luqad kasta.
2. - Waxaan u baahan doonaa inaan kala soo baxno galka luuqadaha Ingiriisiga Mareykanka (en_US) iyo kan Isbaanishka (es).
Casaan ahaan waxaan ku iftiimiyay galka luqadda Ingiriisiga ee Mareykanka.
Cagaar ahaan, waxaan iftiimiyay galka luuqada Isbaanishka, oo ay tarjumayaan xubnaha bulshada Mexico. Eeg sawirka.
Kadibna waxaan nuqul ka sameysaneynaa luqadda Ingiriisiga Mareykanka (en_US). Waxaan galnaa galka Mareykanka.
Kadibna waxaan galnaa galka TS oo lagu calaamadeeyay casaan.
Markaad gudaha gasho waxaan kaheleynaa feylasha ay tahay inaan u turjuno Spanish:
Waxaan soo dejisanaa mid kasta oo feylasha ah ka dibna waan turjunnaa.
Kadibna waxaan kala soo baxnaa galka tarjumaadda luqada Isbaanishka. Cagaar ahaan waxaan ku iftiimiyay galka luuqada Isbaanishka.
Markaad gudaha gasho waxaan kaheleynaa faylal isku mid ah laakiin qaar aan dhameystirneyn oo loo tarjumay Spanish:
Aynu eegno tusaalaha tarjumaadda
Aan aragno feylka oo ku qoran Ingiriis Mareykan ah:
Aan aragno fayl isku mid ah laakiin ku qoran luqadda Isbaanishka:
Marka la isbarbar dhigayo feylasha waxaa muuqata in feylka ktreasurebox.ts Tarjumaada luuqada Isbaanishka, dhowr xariijin oo tarjumaad ayaa maqan.
Waa khadadka maqan ee ay tahay inaan dhigno faylka ktreasurebox.ts ee Isbaanishka. Aniga oo tixgelinayna tarjumaadda af-Ingiriisiga Mareykanka
Tarjumaadda khadadka koodhku waa mid aad u fudud. Tusaale ahaan waa inaan tarjunaa:
Khasnadda Khasnada = Laabta Khasnada
Kadib markii faylasha faylalka luqad kasta la soo dejiyo, waxaan ku bilaabi karnaa tarjumaadda.
Waxaan la xiriiri karnaa xubnaha bulshada WPS si aan u soo sheegno tarjumaadaha aan sameynay, waxaan la xiriiri karnaa qofka mas'uulka ka ah tarjumaadaha.
Waxaan la hadlay dhowr isticmaale, qaar yaqaan Ingiriisiga waxay ii soo bandhigeen inay ka caawiyaan tarjumaadda Kingsoft Office 2013.
Fikradaydu waa inaan ka shaqeeyo koox tarjumaadda. Waxaan uga tagayaa e-maylkeyga haddii ay dhacdo in isticmaale kasta uu xiiseynayo inuu ka caawiyo tarjumaadda: marianocordobario3 [at] gmail [dot] com
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Kingsoft Office 2013 tarjumaadda Isbaanishka
Heer sare Hadda waxay noqon doontaa suurtagal in lagu turjumo Xafiiska Kingsoft gebi ahaanba Isbaanish.
jabay 33 dijo
Asal ahaan tarjumadu waxay ahayd "es_MX" waxaana si sax ah loogu badalay "es" maxaa yeelay waxaan u soo jeediyay abuuraha in dhamaan dadka ku hadla Isbaanishka ay iska kaashadaan tarjumaada Sidoo kale waan iska kaashaday tarjumaada laakiin anigu ma ahi reer Mexico laakiin waxaan ahay Isbaanish, markaa waxaan doonayay inaan sameeyo qoraalkaas yar.
Ku jawaab moray33
Dhanka kale, waad ku mahadsan tahay shaacinta shaqadan, waa tarjumaad aad u ballaaran dadkuna intay iskaashadaan si dhakhso leh ayaa loo dhammaystiri doonaa.
Aniguna waxaan kugula talin lahaa in la adeegsado Qt Linguist (oo lagu daro qt4-dev-tool) si loo saxo feylasha .ts, waa mid aad u raaxo badan oo wax soo saar leh.
Waxaan isticmaalaa Gedit wax dhibaato ahna kuma qabin.
Waad ila soo xiriiri kartaa .... Waxaan hayaa kuwa yaqaan oo ku nool Mareykanka oo raba inay gacan ka geystaan ​​tarjumaadda.
Waan la hadlay iyaga. Cinwaankeyga Google plus waa: https://plus.google.com/104109746841092570517/posts
Emailkeygu waa: marianocordobario3@gmail.com
Fadlan ha quudin software-kan gaarka loo leeyahay. Si ka fiican uga qayb qaado LibreOffice oo u baahan oo bilaash ah.
Waxaan ku siiyaa astaamo
Soosaarayaasheeda ma rabin caawimaaddayda regarding .. ee ku saabsan koodhka iyo fikradaha sidoo kale tayda ayaan ku biiriyaa… ..
Laakiin waxaan ka helay maya codbixin ka socota LibreOffice.
Waxaan la murmay Tor Lillqvist… ..
Nasiib darrose Tor iyo Caollan Mc Namara waxay leeyihiin maskax Retro HackFest oo labaduba waxay ka shaqeeyaan mashruuca Gnome iyo Red Hat iyo iyaga sharraxaadda looma baahna, waxay ka dhigayaan waxyaabo argagax leh sida astaamaha Gnome.
Taasi waa sababta LibreOffice ay ugu sii socoto qaab-u-eegis Office 2003 ah.
Soosaarayaasha LibreOffice dhib kama qabaan hagaajinta khibrada isticmaale …… Aniga iyo dad badan ayaan dirnaa koodh iyo fikrado, laakiin dan kama lihi fikradaha ka imanaya banaanka.
Kaliya waxay rumeysan yihiin in LibreOffice uu ka fiican yahay qolalka kale maxaa yeelay waa ilo furan, oo u furan kuwa haddii qashinka maktabadaha guryaha lagu sameeyo ee VCL ee ay u adeegsadaan LibreOffice aysan haysan API ama buug loogu talagalay kuwa horumariyayaasha kale inay bartaan barnaamijka.
Inaad rumaysato in LibreOffice ay kafiican tahay maxaa yeelay waa isha furan waa baad ama raqiis chicana runtii.
Waxa kaliya ee aan u maleynayo inaad sameyn kartid waa inaad horay ugu sii socotaan astaamahaaga iyo fikradahaaga, ugu yaraan waxaan ka taxadari karaa inaan shabakadaha DL dhinacaaga dhigo si ay u faafiyaan wax kasta oo aad u baahan tahay, waxaanan ka shakisanahay in Elav ama Kzkg ^ Gaara ay diidi doonaan.
Marka laga hadlayo KSoffice, miyaanay iyagu lahayn oo lacag ku kasban noocyo la bixiyo? Nacalad, mushaharka turjubaanka markaa, waa wax aad u fudud in la yiraahdo "hey bulshada, naga caawi bilaash, ka dibna bixi noocyada 'PRO' ee tarjumaadahaaga waligoodna ma arki kartid lambarka badeecadeena;)".
Anigu kama soo horjeedo KSOffice, laakiin haddii aan ka soo horjeedo inaan u adeegsado bulshada mashaariic si cad loo xiray, waa cadaalad daro. Xaqiiqdii, wax la mid ah ayaa ka dhacay halkan Venezuela oo leh Vtelca; asal ahaan munaasibad SL ah waxay u direen horumariyeyaasha kulan xidhan iyaga oo aan u sheegin sababta.
Ka dib markii ay soo ururiyeen, waxaa asal ahaan laga codsaday inay sameeyaan darawal si uu u aqoonsado dhaqdhaqaaqyada iyo taabashada dhacdooyinka 'All-in-one' ee ay doonayaan inay ku sameystaan ​​Canaima Linux, laakiin si bilaash ah.
Haye, sidee u yeelnaa?
Ma ogin, laakiin waxaan dooneynaa in bulshada ay na caawiso
Ka waran hadday na siiyaan xafiis leh mishiinno tijaabiya si aan u shaqeyn karno, oo ay na siiyaan waqtiga ay rabaan inaan shaqeyno?
Miisaaniyad uma lihin taas oo waxaan haysannaa oo keliya 6 bilood
Ahm, waa hagaag markaa, seddexdan horumariyayaal, sidaas iyo sidaas, mengano iyo perennial, waa barnaamijyada ugu fiican halkan, waxayna xitaa wax ku darsadaan barnaamijka 'Linux kernel', iyaga ayaa siiya mashiinnada, wax walba way barmaamij ka dhigaan ka dibna iyaga ayaa uga tagaya lacag bixinta, ma garanayo ka saar
* Qof walba wuu kacay wuuna baxay *
Gunaanad? Bulshadu ma aha doqon, waqti lumis iyo hadii ay wax taageeraan, waa wax ay markaa ka faa’iideysan karaan ama xor ka noqon karaan ... ama labadaba.
Ma aanan ogeyn in taasi dhacday, goorma ayey taasi dhacday? haha waxay u maleynayaan in maxaa yeelay vtelca waxay ku iibisaa qiimo jaban waa inaad iyaga siisaa shaqada ?? .. haha ​​tani way iga qoslisay.
Waxay umuuqataa inaadan xog ogaal aheyn ama aad daruur ku dhex nooshahay… .. google wax yar oo ku saabsan qolkan kahor…. opine ??
Waxaan kala hadlayaa nano dadka ku nool Vtelca, oo ah shirkad reer Venezuela ah "Socialista". Maaha wax adiga kugu saabsan, markaa isku day inaad saaxiibtinimo badan la yeelatid. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta ay horumariyaasha LO aysan u dhageysan codsiyadaada.
Waan ka cudurdaaranayaa markaa si khaldan ayaan u fahmay jawaabta, taas oo loogu talagalay Nano….
Muhiimad ma siinayaan codsiyada…. Sababtoo ah iyagu ma xiiseeyaan inay hagaajiyaan ama nadiifiyaan dhinacyada muuqaalka ee qolka. Wax dhib ah kuma qabo inaan qoro GUI dhan.
Laakiin uma qalanto sababtoo ah iyagu ma aysan qaadan lambarkaaga.
Marka laga hadlayo Vtelca, sida iska cad anigu magacyo idin siin maayo, laakiin waxaan ogahay in yar oo dad ah mahadnaqa dhacdooyinka SL ee aan la abaabulo beeshayda ama kuwa nagu casuuma waddanka oo dhan (FudCon, iwm.), In badan oo ka mid ahi waxay xidhiidh adag la leeyihiin CNTI iyo dowlada (hadii aysan ogolaan waa wax kale) kulankeena ugu dambeeyay waxay ii sheegeen sheekada, sanadkaan ayuu ahaa.
Magacyo ma doonayo, mahadsanid. Marka loo eego nano ku martiqaadka waxqabadyada halkan Maracaibo dadka Velug waa lumeen uu
Dadka GLug sidoo kale waxba ma qabtaan, waxaan nahay kaliya 3 xubnood oo firfircoon, kuwaas oo aan ahay barnaamijka kaliya.
Nano kaliya wuxuu tarjumayaa khadadka qaar, aniga ahaan waa wax aan jirin.
Kuma siinayno 5000 khadadka Qt ama Java code mashruuca Kingsoft Office.
dhamaanteenna bulshada WPS waxaynu nahay isticmaaleyaasha nooca bilaashka ah ee Kingsoft Office, kuwa naga mid ah ee qabta shaqada tarjumaadda Isbaanishka, annaga ayaa mas'uul ka ah ficiladayada.
Ha ka sugin isbeddello waaweyn LibreOffice hana weydiisan qol ku siiya is-dhexgal buuxa oo ka yimaada kombuyuutarrada Gnu / Linux.
Sababtoo ah fikradaha iyo koodhka la hirgeliyey way xadidan yihiin (Maktabadaha Guryaha Lagu Sameeyo VCL).
Waxaan mar kale ku celinayaa in horumariyayaashu ay kaliya kuu sheegi doonaan inaad isticmaasho maxaa yeelay waa isha furan iyo inay ka fiican tahay Apache OpenOffice.
Ma dhahayo LibreOffice ma shaqeyneyso, laakiin waa xaddidan tahay waana sii socon doontaa sidaas dhowr sano oo kale nasiib daro.
Qt, Gtk, Python Ruby, iwm waxay leeyihiin API-kooda iyo buugaagtooda ay heli karaan dadka isticmaala iyo kuwa cusub.
Maktabadaha Guriga lagu Sameeyo ee VCL ma laha buug ama API.
Ma jecli haba yaraatee in horumariyayaashu aysan kaaga jawaabi doonin, markaad rabto inaad ku caawiso.
Waxaan rumeysanahay in xafiiska Kingsoft uu dhooqo ka dhigi karo maxkamadda ama suuqa maxaabiista ee maanta xafiisku leeyahay, xitaa xatooyada qaar ka mid ah adeegsadayaasha Microsoft, iyagoo wasakhda ku ciyaaraya iyagoo nuqul ka dhigaya RIBBON Sameynta tartan wax walba waa socotaa, sida Microsoft u qabato, ciyaar xun.
Markaad ka eegto aragti kale, sida uu sheegay Linus Torvalds.
Linus kama labalabeyn soo dhaweynta soo galitaanka Valve. Waxaan ubaahanahay taageerada shirkadaha sida Valve iyo Freeware si nidaamka qalliinka aduunka sifiican looga yaqaan, hadii kale waligeen kama badnaan doono 2% ama 3% dadka isticmaala aduunka ee kombiyuutarada, ma doonayo inaan arko GNU / Linux oo fadhiya.
Waa inaan sameyno go'aanno sax ah si aan u jabinno fikradda ah in GNU / Linux ay adeegsadaan oo keliya 2% ama 3% isticmaalayaasha adduunka.
Haa maya, maya, ha u maleynin inaan ahay taageere LO sidoo kale, runta ayaa ah inay ka maqantahay waxyaabo aad u yar, in kasta oo KSO aysan sifiican iila qaban hadana wali waxbadan isma dhex galin, laakiin hadaan rabo inaan tijaabiyo si aan u arko heerka isticmaalkeedu yahay iman kara.
LO waxaan ku sameeyay warbixinteydii tababarka, waxaan u arkaa KSO ama Calligra qoraalka, oo aad u culus, laakiin aan tarjumaad Isbaanish ah ku jirin qaamuusyada, waxaan u arkaa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo mid ka mid ah kor ku xusan maxaa yeelay qalad kasta oo farta ah ayaa iga qaalisan Fasalka ugu dambeeya, iyo sixitaanka in kabadan konton xaashi "indho fiiqista" ma aha wax aad u fudud.
Hagaag, uguyaraan waan ogahay sababta isku xirnaanta LO, haddii aad la macaamilayso dadka sidan udhaw, maxaa yeelay majiro ikhtiyaar kale oo aan ka ahayn iskaashi lala yeesho «xafiiska Shiinaha», waxaan ku arkay faylal qaar kamid ah Github repo walina waxaa jira waxyaabo dhiman u tarjun sida aasaasiga ah tusaale ahaan midabada qaar.
Kaa been sheegi maayo CAT, waxaan u sameeyay astaamaha 16 × 16 ee barta dhinaceeda iyo biraawsarka LibreOffice oo kaliya doonayay inuu caawiyo. Midkoodna nashqadeeyayaasha naqshadeynta iigama jawaabin, kaliya maamulka ayaa ka jawaabay.
Waa tan caddeyntii
Dad badan ayaa soo gudbiyey koodh iyo fikrado ku saabsan is-dhexgalka.
Tusaale ahaan Adriano Afonso oo reer Brazil ah,
Waxaan diray fikradahayga waqtigaas
Horumariyayaashu waxay kuu sheegayaan inaysan shaqeyneyn ama waxay kuu sheegayaan inuu isbedello xoogan ka dhici doono dhanka garaafka, ka dibna ay kaliya koobiyeeyaan Apache OpenOffice.
Markii aad weydiiso wax ku saabsan sida barnaamij loogu sameeyo maktabadaha VCL (kuwa macmalka ah), horumariyeyaashu kaama jawaabayaan, markaad rabto inaad ku caawiso.
Mariano, ugu horreyntii waxaan rabaa inaan kugu hambalyeeyo shaqada wanaagsan ee aad qabatay. Astaamaha aad soo dirtay waxay iila muuqdaan kuwo aad u qurux badan oo xirfad leh aniga, iyo jeesjeesyadu waa daaweyn dhab ah.
Sida qaar badan oo ka mid ah kuwa halkan ku faalleeyey, waxaan si aad ah uga xumahay in dhammaan dadaalkaas aan loo adeegsan karin mashruuc bilaash ah, iyo muhiimaddaas oo kale, sida LibreOffice ay tahay.
Waxa kale oo ay iga murugootay in ay kaaga fududdahay ama ay kugu dhiirigalinayso inaad lashaqayso mashruuc gaar loo leeyahay halkii aad kaheli lahayd mashruuc lacag la’aan ah.
Waa qashin dhab ah in qof karti kuu leh uu ku dhammeeyo turjumaad xafiis qowmiyadeed.
Waxaan jeclaan lahaa inaan si uun u adeegsanno bulshada adeegsadayaasha 'LibreOffice' inay codkeena ka dhagaystaan ​​kuwa horumariya LO. Ugu yaraan fududee in la soo rogo xirmo kale oo ah astaamo. Waxaan rajeynayaa in qaar ka mid ah mufasiriinta ay la yimaadaan hab kaa caawinaya inaad tixgeliso soo jeedintaada, wanaaga LO iyo isticmaaleyaasheeda.
Dhinaca kale, waxaan dareemayaa in tartanka suugaanta xafiiska, barnaamijka bilaashka ah uu mar kale dib uga dhacay gadaal. Maanta waxaan u baahanahay inaan helno bedel bilaash ah oo ku saabsan dukumiintiyada google, taas oo noo oggolaaneysa inaan la shaqeyno dukumiintiyada adag ee wadashaqeyn ah, xitaa aaladaha moobiilka, iyo ixtiraamka asturnaantayada.
Waxaan dareemayaa inaan taas ka fog nahay.
Waxaan ka mid ahay liisaska 'libreoffice list', waxaana ii haray aragti ah in astaamahaaga loo diiday sababo la xiriira dhibaatooyin shatiyeed oo aan la xallin, sababtuna ma ahan in lagu diiday. Hadda LibreOffice 4.2 wuxuu leeyahay astaamo cusub oo Sifr ah, dadka ha ku eedeyn xanaaq
Ha noqonin sida fanboy iyo Fitoschido oo natiijada ka dhalata, Waxaad difaacdaa kuwa aan la aqbali karin.
Runta ayaan u sheegayaa dadka caddaynta wata, oo aan ku muujiyey xiriirinno. Anigu ma ihi natiijo
Sifr icons-ku ma wada dhammaystirna dhammaan isticmaalayaasha LibreOffice way ogyihiin, xitaa astaamaha Sifr ee LibreOffice 4.2 ayaan dhammaystirnayn.
Sidoo kale ma doonayo inaan ku soo rogo astaamahayga, oo ku saabsan liisanka waxaan u beddelay liisanka astaamahayga liisanka uu Michael Meeeks igu taliyay aniga, barnaamij-yaqaan aan ixtiraamo maxaa yeelay isagu daacad buu ii ahaa, wuxuu ku taliyay liisanka MPL 2.0.
Waxaan cadeeyay bilawgii in ujeedadaydu ahayd inaan ka caawiyo mashruuca astaamaha maqan ee mashruuca Sifr. Gaar ahaan astaamaha 16 ons 16 ee biraawsarka iyo dhinac dhinac ka maqan yihiin.
Aan caddeeyo in astaamaha Sifr (Flat icons) ay u muuqdaan kuwo heer sare ah.
Waxaan u hambalyeynayaa Issa Alkurnas waxaanan urajeynayaa nasiib wacan. Laakiin Mirek waa nin edeb daran oo ka soo horjeeda fikradaha horumariyayaasha kale.
Mashruuc ay kuxirantahay ribon interface oo kusalaysan libreoffice ayaa durbaba soo baxay laakiin kani waxaa kaliya loogu talagalay daaqadaha ilaa iyo hada :(, si wanaagsan ayaan rajeynayaa in maalin uun ay soo saareyaasha libreoffice tixgelin doonaan http://www.neoteo.com/merge-word-2014-procesador-de-texto-basado-en-libreoffice/
Jawaab ku bixi Marco Sumari
"Ha quudin software-kan" Privial "... bls, blah, blah. Fadlan, haddii ay ka shaqeyso si ka wanaagsan libreoffice, waa sidaas. Midda ay tahay inuu raadsado waa waxqabadka iyo waafaqsanaanta dejisa dhabarka badan ee GNU / Linux.
Dhab ahaan waan kugu raacsanahay, gabagabada ay inbadan oo injineero ah uyimaadaan ayaa ah in softiweer bilaash ah ama lahaansho midna uusan qummanayn oo ay tahay in labaduba lawaafajiyo, waa inaan joojino xagjirnimada.
KO kama badna LO dijo
Laakiin runtu waxay tahay Xafiiska Kingsoft:
- si fiican uma muujinayo noocyada
- si joogto ah ayuu u laalaadaa
- tarjumaadda Isbaanishku waa waxba kama jiraan
- ma taageerayo opendocument
- maahan bilaash laakiin wuxuu ka codsanayaa bulshada inay shaqada adag u qabtaan biinanka
- kama baddelo xafiiska inuu kafiican yahay libreoffice (si kasta oo caksi u noqota ku celcelinta kun jeer)
Kajawaabida KO ma ahan wax lamid ah LO
Maxaad u caawineysaa wax xiran? Ma laha caqli gal ama sabab loo ahaado.
Dhab ahaan Haddii aanan garanayn duruufaha ay ku isticmaali doonaan midhaha waqtigayga, la shaqeyn maayo.
«» »» »» Haddaanan garanaynin xaaladaha ay ku isticmaali doonaan midhaha waqtigayga, la shaqeyn maayo. »» »» »».
Waa goorma ??? . Haddii aadan dooneyn inaad iskaashi la sameyso si kastaba ha noqotee. Qof kastaa wuu ogyahay inaad tahay isticmaale LibreOffice oo isu beddelaya:
Masiirka aaladda otomatiga ee gaarka loo leeyahay ee Linux waa in la xoreeyo ama la jabsado .. Laakiin sida wax kasta oo iska kaashanaya, qofkii raba inuu iskaashi sameeyo iyo ciddii aan yeelinba, waa inuu aamusnaadaa, in kasta oo shaqsiyan aanan arag wax macno ah
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad ka soo horjeeddo LO, waxaad wax ku darsan kartaa Calligra in kasta oo ay wax badan ka maqan yihiin ... wax badan ... waxay la shaqeysaa QT waadna ku doodeysaa, ma dokumenti baa, run ??, marwalba waad taageeri kartaa barnaamijka bilaashka ah.
Halkan waxaan kula ciyaaraa Mariano huh.
Libreoffice waxay sheeganeysaa inay furantahay, laakiin waa dhalanteed, ama in kabadan dhalanteed farsamo.
Faa’iido maleh in la sameeyo barnaamij maktabado iyo koodh gacmeed lagu sameeyay oo aan lagu fahmi karin qof kale oo bini’aadam ah oo aan ka ahayn horumariyaha. Waxay la mid tahay sameynta lambar sir ah oo xiran. Isku mid ah ... waa sida dhabta ah IP-ka-hortagga. Saameyntu waa isku mid: qofna kuma soo biirayo koodhkaaga, cidina ma fiiqayso, cidina ma fahanto, cidna kuma darsanayso.
Haddii aan ku darno tan markii aad rabto inaad wax ku darsato, waxay kaa saarayaan shitting ... buah, furan ayaa leh calaamadda kaliya.
Xafiiska Kingsoft WP, dhanka kale, isagu ma qeexo inuu yahay il-furan (runtiina wax fikrad ah kama lihin koodhka ilaha barnaamijka), laakiin inkasta oo ay taasi xiriir aad u badan la leedahay bulshada isticmaaleyaasha marka loo eego libreoffice weligeedba. tan iyo markii aan bilaabay isticmaalkeeda. (~ 8 sano horeyba? Fuuuu), sidaa darteed xukunka "a priori" waxyar ayuu qatar yahay. Isbarbar yaac, ugu yaraan markay timaado adeegsadayaasha doonaya inay iskaashadaan, Kingsoft si macquul ah ayaa uga furan Libreoffice. Fog Ka fog
«Kingsoft si macquul ah ayaa uga furan Libreoffice. Fog Ka fog
Phew, ereyo adag.
Libreoffice-ka waxay noqon karaan kuwo sifiican u socda sida lammaanaha u muuqan karo (shaqsi ahaan aniga iima muuqdo), laakiin haddii aan ka hadlayno ujeedo ... libreoffice, laakiin u beddel astaamaha kuwa marianogaudix dhibaato la'aan (shaqadeyda gaarka ah ama qof kastoo ku rakib iyaga)
Gudaha Kingsoft oo ah "mid furan" ma beddeli kartaa astaamaha?
LibreOffice kuma badali kartid astaamaha …… taasi waa runta….
waxa kaliya ee aan sameyno ayaa ah inaan badalno sanduuqyada__ku_wareegsan ama images_human …… taasi waa, waxaad baabi'ineysaa waxyaabaha ku soo dhaca ee sida caadiga ah LibreOffice…. Si aad u bedesho astaamaha ku yaal LibreOffice waa inaad ku sameysaa iyada oo loo marayo terminal mana ahan wax u fudud qofka cusub.
**** ---------------------------------------------------------------------------------------------- *********************************
Si aad u bedesho astaamaha ku yaal Kingsoft Office kaliya waa inaad ka heshaa galka halka ay ku yaalliin astaamaha Suite ee Shiinaha oo aad ku beddesho adoo isticmaalaya terminaalka …… wax ka duwan waxa aad ku qabato LibreOffice markaad beddesho astaamaha.
Waxaan isku dayay inaan astaantaada ku dhajiyo LibreOffice wayna shaqeysaa, marka majiro runta shaqsiga ah, fadlan.
Xirmooyinkaas waa la beddelay, iyo in aan lagu riixin gujin waa arrin gaar ah. Muhiimadu waxay tahay in liisanka uu oggol yahay, haddii qof rabo inuu abuuri karo rakibe LibreOffice leh astaamaha ay ku jiraan, u soo raaci AUR (tusaale ahaan) oo ku hay ilaa inta ay doonaan, dhibaato la'aan.
Hubaal, softiweer kasta oo astaantiisa ku jira galka oo aan loo uruurin sida ilaha "Waan kari karaa" in la beddelo, laakiin la isku dayayo in taas lagu sameeyo halista software-ka lahaanshaha ugu yaraan la helo emaylka "jooji oo jooji".
Marka faallo ah inay tahay "mid furan" waa ka saami la'aan.
Sababta aan u wada shaqeynayo ayaa ah in aan caawiyo dadka isticmaala Kingsoft Office iyo in kernel-ka GNU / Linux uu sifiican u yaqaan (adeegsadayaasha cusub), qaabkan si dadban fikradaha software-ka bilaashka ah ayaa sifiican loo ogaan doonaa.
Soo-saareyaasha LibreOffice waxay kuu sheegi doonaan inaadan ku arki doonin isbedello culus LibreOffice taasi waa runta.
Waan ku raacsanahay booska Linus Torvalds.
Waxaa jira noocyo kale oo feylal ah oo aad iska kaashan karto kuwaas oo yara fudud, halkaasoo tarjumaadda lagu sameeyo isla markaana sumadda tarjumaadda laga beddelayo. Guud ahaan waa midabyo iyo waxyaabo fudud, sidaa darteed qof kasta oo leh rabitaan iyo waqti yar ayaa ku caawin kara.
Qoraal aad u wanaagsan Mariano 🙂
pucha waan tirtiray astaamaha: a said ...
bah! .. ku lebbisan mid dhammaystiran, oo ku jira qaansooyinka fokin.
Doodda mawduucan uu abuuray waa mid xiiso leh, waxay igu buuxinaysaa sharaf inaan arko inay jiraan dad badan oo reer Venezuela ah oo ku dhex socda adduunkan weyn ee software-ka bilaashka ah.
Su'aashayda kuwa halkan wax ka faalloodaa waa kuwan soo socda: Immisa qolal xafiis ayaa jira oo xilligan ah kuwo gaar loo leeyahay ama bilaash ah oo runtii ah arrin welwel ku ah M $? Hadday jirtana midkee, fursado noocee ah ayey u siisaa adeegsadaha inuu rabo inuu si buuxda ula shaqeeyo?
Fikradayda is-hoosaysiinta ayaa ah in WPS KSO xafiiska ama wax alla wixii loogu yeero ay u taagan tahay beddelaad in kasta oo aysan gebi ahaanba xor ahayn, waa beddel wanaagsan.
Horumarka ay haysato waxaan dhihi lahaa waa bilo kahor intaanan arkin natiijooyinka, qeyb ahaan waxay ku qasbi laheyd M $ inuu tixgeliyo nooca bilaashka ah ee qeeybtiisa isla markaana dadka LO ay ka dhigeyso inay fikirto, maxaa yeelay xaqiiqda luminta isticmaaleyaasha ayaa kaa dhigeysa fakarka iyo ilaa iyo hada waxaan arkaa oo kaliya in KSOffice ay tahay mida heleysa isticmaaleyaasha isla markaana sii wadi doonta inay sidaa sameyso maxaa yeelay si fudud ayey umuuqataa oo mararka qaarna wey jabisaa wax qabad kasta oo dheeri ah, maanta taasi waa kiiska oo waxaan ka shakisanahay inuu isbadali doono waqtiga dhow.
Waad ku mahadsantihiin qof walba faallooyinkiisa, wax yar ayaan ka bartay midkiin kasta oo waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doontaan xariggan.
Salaan ka timid Caracas, Venezuela
Ku jawaab darcloni
Arthur Garcia dijo
Waxaan u maleynayaa in, in kastoo dhammaan dadka isticmaala KingSoft Office aysan diyaar u noqon doonin inay la shaqeeyaan tarjumaadda (mowduuca ugu horreeya), kuwa sidaas sameeya waxay noqonayaan inay "shaqsiyan" adeegsigooda u adeegsadaan barnaamijku mid "raaxo leh" (oo aan la bixin). . . . iyo natiijada. . . waxay umuuqataa isweydaarsi la aqbali karo in laga wada shaqeeyo bedelida helitaanka softiweerka bilaashka ah ee aan rajeynayo inuu wanaagsan yahay. . . (Hadda waan rakibay)
Ku jawaab arturo garcia
Mariano, waan ka xumahay in faallooyinkaani aysan ku saabsanayn boostada laakiin ... Ma waxaad tahay Argentine?
Jawaab Benjaminamín Morales
Haa maxaa yeelay?
xoogaa Tarjumaad ah KingSoft laakiin loogu talagalay Windows .. ??…
Waxaan rabaa inaan ogaado haddii uu jiro mashruuc tarjumaad laakiin daaqadaha.
Dhinaca kale, dhaleecaynta ayaan iyagana wax mushahar ah siinayn. Waqtigana way luminayaan.
Jawaab Euclides Gonzalez (Panama)
Mudane Armando Ibarra dijo
Wuxuu u diray qoraal bash ah oo uu isagu abuuro si loogu rakibo (haddii kale) xirmada xafiiska ee xafiiska 'Office' ee ku jira Arch linux ama Ubuntu, sidoo kale wuxuu gurigaaga ku soo saaraa siib si loogu beddelo luqadda Isbaanishka
Sidoo kale u hambalyeey balooggan, tan iyo markii uu ka hadlayo waxa ugu fiican (feker ahaanteyda) GNU / Linux Operating System
Jawaab Ing. Armando Ibarra
sifiican, inta qof kastaa doodayo, waxaan bilaabay inaan u turjumo qaabkeyga, si toos ah iyo kali .. halkaas ayaan ku wadaagaa!
Ku jawaab richardelima
Waan hubiyey wps-ga oo wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa Microsoft Office, waxaan kaa codsan lahaa inaad si deg deg ah u daabacdo turjumaad ugu yaraan is dhexgalka ah si kumanaan isticmaale ahi isla markiiba u isticmaali karaan (waa baahi weyn), tani waxay kordhin doontaa caannimada wps iyo rajada tarjumaadaha xiga ee ugu dhameystiran ee la bixin karo, laakiin si uusan u duugoobin, waxaa lagama maarmaan ah in isla markiiba wax laga qabto.
Ku jawaab gunnar hs
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay isbeddelka mawduuca, laakiin maadaama aan cusbooneysiiyay wps illaa nooca 15 Anigu ma deyn karo bogagga internetka ee u muuqda bilowga, ama ma heli karo ikhtiyaarka aan ku baabi'iyo.
Dayactir: Qorfe kama dhimayo ama kuma kordhinayo dhalaalka Arch Linux